Las Vegas, 9 Jona 2021 (Global News Agency) -Ny Seller Scientific tao Las Vegas, Nevada dia niresaka momba ny teny lakile sy ny tombotsoan'ny fikarohana teny lakile ho an'ny fahatanterahan'ny mpivarotra Amazon. Vao haingana ny orinasa dia nanambara ny fanombohana ny fitaovana keyword FBA an'ny Amazon, izay natao ho an'ny olona mivarotra amin'ny A ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tolakandron'ny 16 Jona, ny fiaran-dalamby voalohany amin'ny seranan-tsambo iraisam-pirenena yinchuan mankany chongqing dia niainga avy tao amin'ny gara atsimo yinchuan. Ity kaomandy vato manokana ity dia misy kaontenera 60, milanja 1650 taonina, ary manodidina ny 6,73 tapitrisa yuan ny sandany. Ny fiasan'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Indianapolis-Enina herinandro lasa izay taorian'ny namonoan'ny olona mitam-basy olona valo tao amin'ny tranon'ny FedEx any Indianapolis. Nandritra izany fotoana izany dia niray hina ny vondrom-piarahamonina mba hanohana ireo tra-boina, ireo tafavoaka velona sy ny fianakavian'izy ireo, ary nanangona vola mitentina 1,5 tapitrisa $. “Rehefa misy tranga toy izany dia mahatsiaro tena ho tsy afa-manoatra ny olona a ...Hamaky bebe kokoa »
DHL dia miantoka ny fanofana vaovao ho an'ny trano fanatobiana entana Hams Hall an'ny Logicor 219,22 metatra toradroa
Logicor, tompon'entana sy mpandraharaha ara-barotra eropeana malaza, dia nanofa trano fitahirizam-bokatra 219 112 metatra toradroa ao amin'ny Hams Hall Distribution Park any Birmingham, UK ka hatramin'ny DHL. Ny mpitarika manerantany amin'ny indostrian'ny lozisialy dia nanao sonia fifanarahana maharitra maharitra amin'ny tranokala hihaona amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Tonga amin'ny indostrian'ny fandefasana entana ny valanaretina vaovao any India
Mampiasa cookies izahay noho ny antony maro samihafa, toy ny fitazonana ny fahamendrehana sy ny filaminan'ny tranokala FT, ny fanaingoana manokana ny atiny sy ny dokam-barotra, ny fanomezana endrika haino aman-jery sosialy, ary ny famakafakana ny fampiasana ny tranokalanay. Ny onjan'ny aretina Covid-19 any India dia nahatratra ny indostrialy fandefasana ...Hamaky bebe kokoa »
Ny LNG satria ny solika dia manangona haingam-pandeha, fa ny sambo antitra kosa dia miatrika fivontosana eny an-dalana
Ny 18,5% amin'ireo trano vaovao nifanarahana tamin'ny efa-bolana voalohany tamin'ny 2021 dia natao hiasa amin'ny LNG ho solika araka ny filazan'ny fiarahamonina DNV. Paul Bartlett | 13 Mey 2021 Na izany aza, maro ny sambo tranainy toa tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny karbaona IMO vaovao azo raisina ao amin'ny MEPC ...Hamaky bebe kokoa »
Ny lojika iraisam-pirenena dia misy lanjany lehibe amin'ny orinasam-barotra vahiny
Ahoana ny fomba hahitana orinasa mpamokatra lojika fandefasana entana? 1. Ho an'ny varotra ivelany misy antsika, arakaraka ny haben'ny orinasam-barotra any ivelany no mihamafy ny fitomboan'izany. Voalohany indrindra, tsy maintsy misy ny orinasam-pitaterana iraisam-pirenena momba ny fandefasana entana sy milistra matanjaka toa an'i Taishan. Ity orinasam-pitaovana fandefasana entana ity dia tsy voatery de ...Hamaky bebe kokoa »
Fironana fampandrosoana ny lozisialy iraisam-pirenena
Miaraka amin'ny fironana amin'ny fanatontoloana sy ny fivelaran'ny serivisy mihitatra, ny foto-kevitry ny rojom-pivarotana lozisialy dia samy hafa tanteraka tamin'ny teo aloha, ny fizotran'ny asa dia mihasarotra hatrany, ary ny fepetra takian'ny mpanjifa dia mihamafy hatrany. Noho izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy, misy ny expe ...Hamaky bebe kokoa »
Indostria lojika iraisan'ny fifandraisan-davitra iraisam-pirenena
Ny indostrian'ny lozisialy fandefasana fifantohana iraisam-pirenena dia mifamatotra akaiky amin'ireo indostria lehibe hafa, toy ny indostrian'ny express sy ny indostrian'ny e-varotra, miaraka amin'ny fotoana mety hiarahan'ny fiaraha-miasa. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany sy ny fanitsiana ny rafitry ny serivisy amin'ny alàlan'ny fampidirana dia tsy vitan'ny fanatsarana ny ...Hamaky bebe kokoa »